Umhla My Pet » Dating – Ngaba bonakalise Yourself?
ukubuyekezwa: Jan. 13 2021 | 5 min ukufunda
"Andikuthandi ndithandana" na ndiya kuva abafazi bam kubaxhasi bonke badla izimvo. Le banokungawuthandi ukuthandana yenye yezizathu ezenze ukuba amabhinqa angatshatanga zinokuhlala 'ziyaxinga' kwaye elinye ixesha elide kangaka. Uninzi abafazi ndifike liphela indlela yam kusenziwa uqeqesho Ukuthandana ngokupheleleyo engalunganga ingqondo iseti, ethetha ukuba indlela ndlela ndithandana okunene sabotages amathuba abo yokuhlangana liqabane labo ubomi.
Ukanti oku kubangelwa kukuba iyaqondakala ngokupheleleyo. Siye bonke bekukho, 'Ukunyanzela' ngokwethu ukuba emdlalweni, nokusayinela kumanxuwa ukuthandana online, efunyenwe ngokusebenzisa imiyalezo maxa barhubuluze ulusu, amaninzi ebantwini atshatileyo nezinye mke, yaye ekugqibeleni ukunika umntu ithuba kuba ukhangela intle. Making zoqhagamshelwano, bencokola phambili nasemva, mhlawumbi ekuqaleni ukufumana siloziza uchulumanco - kubonakala intle, nguye buntlana akukhangela imifanekiso kwaye kukho unxulumano article. Ngoko ke ukulungiselela intlanganiso. Wena luvo, uchitha elininzi ixesha namandla ndilungiselela, uyazibuza ukuba wenza impazamo, kodwa ukwenza iinzame, ngokutsala ingubo yakho, ziye kungena ingqele, uye naphi (iiyure kaninzi ezimbalwa nokuba) ukuhlangabezana umhla wakho. Uziva nemincili ngoku, emva kokuba zonke akwazi 'umntu'.
Kwaye ke ukumbona! Intliziyo yakho ngokwamathontsi kuba ukhangela NTO ezifana nemifanekiso yakhe, enyanisweni yena ngaphezu 'Shrek' kune 'Becks'. Nguye mfutshane intshi ezimbini ngaphezu wathi yena, kwaye loo mifanekiso ngokucacileyo kuthatyathwa kwiminyaka emininzi eyadlulayo ukugweba ubunzima engaphezulu kunye nokunqongophala olucacileyo ngoboya! Kodwa ke ukuba luthi lwenze 'itrayi' ukuba bamnike ithuba, Ndithetha ukuthi nina ke zonke indlela apha! Kukho malunga ubutsalane kangangoko ubuya kuziva kunye ikhaphetshu kwakuba kwaye baqale uceba zokubaleka. Kodwa awufuni ukuba krwada ukuze ahlale kwiyure kabuhlungu ye kunzi-, asikokuncokola nto kakhulu, kwaye lonke ixesha abathanda nje ukuba kude. Uxhulumaniso ukuba kwakukho ngekhompyutha zazingabonakali kwaye ngokucacileyo bobabini uziva ungakhululekanga. Njengoko kusalisa imvula uyazibuza ukuba kutheni wachitha ixesha, imali nomgudu ukuba ngomnye umhla kwaye intloko imvakalelo ekhaya Mabadane nangakumbi ngokuqinileyo elikhuselweyo kukholelwa ukuba nje akukho naziphi na amadoda onesidima apho phandle kuni! Oku akukho nto abafazi iye ifakwe phezulu.
Dating unako Ingakhathaza kakhulu kwaye kulula ukufumana lungakutyhafisa. Kusuke kuvakale ekufunxeni yaye intliziyo ebuhlungu isithi ukuya kwi umtya kwemihla nabantu ukuba uziva kungekho ilangatye kunye, yaye amathemba akho intlanganiso iqabane kwacunyuzwa kwakhona kwaye kwakhona. Kukho umngcipheko andafana xa usenza ezininzi ukuthandana nabanye abafazi babe lokubacingela kakhulu kunye nokuva. Le nto ayizi ukunceda imeko yakho konke konke, kuba xa na kule imo, ibhinqa elinye lula uyamkhumbula Mr Right ngokupheleleyo xa athe weza yena kunye.
Ngaba ubusazi ukuba uninzi lwabasetyhini andinamsebenzi izibiliboco indoda ukuba kamva uye ukutshata xa kumkhawulela kuqala kuye? nomdla! Uphando lwakutsha nje kwi Daily News iqikelela ukuba ngeenxa 22% lezibini kumkhawulela ngomsebenzi. Oku akukho ngozi – kungenxa atha- ovunyelweyo ukwakha ngokwendalo, ixesha elidlulele. Yaye kumaxesha amaninzi kudla umntu ukuba akasoze baye banikwe ithuba ukuba wayedibene online, into siyifake engqondweni njengoko nawe uhluzwe ngokwemidlalo zakho.
Ngoko ntoni ngoko ukutshintsha oku kucaphuka malunga ukuthandana?
Kakuhle enyanisweni utshintsho elula ucaphuke yonke into efunekayo ukuze inguqu lonke amava ukuthandana ngokwakho ukuze okunene uqale esiyiphilayo, kwaye ungatsalela umnxeba xa umntu wakho phi ngokukhawuleza. Ukuba abasetyhini baqala ukubukela ukuthandana njengoko 'practice fun'Baya kuba nempumelelo okuninzi, kwaye baya kunandipha inkqubo okuninzi. Ngoko ke yintoni kanye kanye 'practice fun'kuthetha?
Ezi TIPS TOP uya kukuxelela ukuba usebenzise indlela 'practice fun ' ndlela impumelelo.
1. Drop ajenda.
Musani ukuzicingela ukuba undofa enokwenzeka, endaweni kubakho kulo mzuzu nalo mntu omtsha nje uze ukwazi ngaye. Yinto umhla nje – akukho isithembiso ubudlelwane okanye umtshato - yinto nje ikofu, okanye uhambe okanye nantoni na oyenzayo kunye. Amancedo apha intlumbini, Okokuqala kuya kuthatha yonke uxinzelelo ukuze uyakhululeka zombini, kwaye uya kuvakalelwa kukuba. Uninzi amadoda alungileyo luvo ngomhla wokuqala kwaye musa obuvelayo konke okusemandleni abo, kunjalo oku kuya kukunceda angabi nakoyika. Okwesibini ufumana ukuqhelisela uhleli abantu abathanda ukuba, ethetha ukuba yakho self-esteem unyuka, xa 'umntu wakho' ibonisa up sele ukulungele kuye kuba uye waba 'yendalo'.
2. Gcina imihla zokuqala mfutshane kakhulu.
Musa ukwamkela imihla isidlo nemihla zokuqala ezimbalwa kuba inde kakhulu ukuba ndichithe nomntu andazi. Ngeyure ngalinye ixesha elininzi esilichitha isibini sokuqala yeentlanganiso. Mfutshane kwaye impactful oko siza apha. Oku kuya kunceda ukuthintela udinwe kakhulu xa uthandana abantu ezininzi ngexesha elinye ekuqaleni.
3. Musa ukunxibelelana ngekhompyutha kunye nabantu abahlala kakhulu kude kuwe.
Oku konga amandla amaninzi kunye ebuhlungu. Yiba kulawula abantu umhla kuphela yengingqi kuwe (kwisithuba iincopho kumgama ezinika iyure). Uninzi iziza kwikhompyutha inomsebenzisi apho u nga lungisa iziphumo zophendlo lwakho kuquka abantu kumgama othile kuphela. Khumbula ukuba awunyanzelekanga okunene umntu de odibana nabo buqu, ukuze abantu basoloko uxhulumaniso oluselayinini nje phaya xa udibana ubuso ngobuso. Kwakhona uNojaji umntu uhambela umfazi ngenxa nemihla.
4. Khululeka abone umhla. Yonwaba!
Lumka – oku akuthethi kusela enezo utywala! Nangona mna ukuqonda isizathu sokuba abantu othululwayo ngomhla wokuqala kulunge lokuyeka ngokupheleleyo okanye ubambelele enye kuphela ngomhla wokuqala ukuze ngokwenene bahlale ecacileyo ekhokelwa kwaye ubone indlela ovakalelwa ngalo mhla, ngaphandle kotywala izinto ithinti zazimhambela. Endaweni ubone ukuba unako ukufumana into umdla ngaye, wonke umntu unento!
5. Mnike ithuba.
Oku kuthetha ukuba ufumana umhla wesibini ukuba uyayifuna, ukuba uziva ukhuselekile kunye naye. Kokumnika eli ithuba nokuba ku ukuba bangaziva otsaleleke kuye. uEwe! Le yinxalenye ebalulekileyo ye nkqubo, ngakumbi koomama kuba ngumzekelo kobudlelwane olubi namadoda icholwa abangengabo okulungileyo kubo.
6. Makathi ke kukhokelela
Oku zonke ziyinxalenye indlela yam yonke kubafazi abo bafuna nolwalamano. Ngoko ke loo nto ithetha ukuba uya kuba lowo ukucela ngomhla wesibini, ukuba kukho enye. Kwakhona sishumayeze ukuba uhlawula kuba kusinceda uyimise ubudlelwane olutshintshatshintshayo ngokuchanekileyo, nangona Ndiyaqonda oku sinokuphikiswa abanye abantu. Ladies ofuna ukuba esimnandi ekunene?
7. Zinyamekele ukunyaniseka ngokupheleleyo malunga nendlela oziva.
Xa wena ngale mihla nala madoda nani banyanisekile yaye uthi ukuba uziva njani, nokuba oku kunzima ukwenza oko ekuqaleni. Ngoko ukuba uziva uyabhoreka / luvo / icinyiwe / anomdla / nemincili uyakwazi ukuchaza ukuba. Akukho ngendlela bitchy, ngendlela kwaye banyaniseke. Oku akuvingce amanye amabhinqa, yaye uya kumangaliswa yindlela abantu abaninzi ulidle nyalasa yaye unolwazi ukunyaniseka. Plus wakuvulela indlela lokwenyani, nangokunyaniseka, aze amnike ingxelo leyo thuba liyimbunguzulu kuye ukunyenyisa siqinise umdlalo wakhe kuwe (ukuba ucinga ukuba kuyingenelo – apho wena).
8. Yiba nobubele, abanomdla ngembeko.
Mhlawumbi ucinga ukuba umntu wakho ofanelekileyo, kodwa yena uye wabonisa phezulu kuwe yaye uniphethe ukuya kumhla, kwaye ufanelwe uxabiso.
Ukuthandana ngale ndlela akuyi kunceda nje ukuba nandipha ngakumbi, kodwa kuya kukunceda ukuba ukwakha 'izihlunu ulwalamano' wakho kuba uza kufumana ukuqhelisela ukuba wena (olomeleleyo, umfazi esobukhomokazi) ngeenxa njengamagorha. Yaye ngoxa esenza konke lo mntu wakho uya kubonisa phezulu xa ubuncinane ubunokulindela!
Landela la macebo phezulu ukuthandana ubone ukuba ingaba amava akho ukuthandana uguqula ngokupheleleyo.